Kemgbe m buluru @IGIHEma na @ihe omumeakwụkwọ “Kpọ aha Onwe Gị”Amalitere m ịkọ nkọ na mkpebi nke m mere n'isi mbido ntorobịa ntorobịa m. Afọ ndị gara aga, m kere mmadụ aha ya Addy. Ọ bụ akụkụ nke ngwanrọ ahụ, mana karịa nke ahụ, ọ bụ onye kachasị aka na-enyere ndị ahịa anyị aka. Ebum n’uche bu ka ndi mmadu tinye ya na AddressTwo abuo karie nke m. Ọ na-arụ ọrụ. Taa, amalitere m ịjụ, sị: Ọ bụ ihe ọjọọ m chọrọ ka onye ọzọ bụrụ ihu ụlọ ọrụ m - onye adịgboroja?
Ka anyị malite na ihe kpatara ya. Nke a abụghị ụfọdụ nnwale mmekọrịta ọha na eze gbagọrọ agbagọ. Nke a abughi echiche na-ezighị ezi banyere eziokwu amụrụ site na nwata m na-egwu Legend of Zelda na RPG ndị ọzọ (nke m na-emeghị, btw). Nke a bụ usoro agbakọtara. See hụla, enwere m ọhụụ site na ọgwụgwọ nke azụmahịa gara aga ebe onye ọ bụla na-azụ ahịa Nick-ọ bụghị ụlọ ọrụ Nick, ọ bụghị ndị ọrụ Nick, naanị Nick. Na m, nke ahụ pụtara na Nick enweghị ezumike na nke kachasị mkpa, Nick enweghị ike ire ụlọ ọrụ ahụ ọtụtụ ijeri ma soro nwunye Nick na ụmụaka lara ezumike nká.
Addy mepụtara ka ọ bụrụ Nick ka mma. Ọ naghị arahụ ụra. O nweghi ndi ezinulo na-eche ihe mere Addy na-acho email mgbe abali. Ọ gaghị enwekwa ọrịa kansa n’anwụ ma hapụ ya n’ọfụ ma na mberede. Addy agaghị enweta ezigbo ahịa site na mbido buru ibu na ịgbapụta ya na ndepụta ndị ahịa anyị. Ọ gaghị ewe ndị mmadụ iwe site na iji ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na echiche okpukpe ya nwere ikike na-enweghị ike iguzogide ntinye na akaụntụ twitter. Addy na-amụmụ ọnụ ọchị ma na-eje ozi.
Mana gbalịa ka anyị nwere ike, ọ bụghị onye. Pinocchio bụ akụkọ ifo. Ya mere, gịnị ka m bụ? Okike? Ma ọ bụ oyi?
Dịka onye na-azụ teknụzụ, enweghị m ike iche ụdị avata ọ bụla ọzọ m nwere njikọ siri ike na. Cheta mpempe akwụkwọ ahụ na anya na ọnụ nke bounced n'akụkụ akụkụ nke MS Okwu 2003? Kedu ihe jerk. Ọ dịghị mgbe ọ bụla m chọrọ ya, mana o mere ka o were ya okpukpu abụọ maka mmemme ahụ. Twitter emeela otu avatar kachasị asị na mgbasa ozi mgbasa ozi: Fail Whale. M na-atụ egwu na ọ bụrụ na e nwere otu outage, otu mbon ntịme nke Californians iwe ga-ichu nta hump Akwaga n'ime ikpochapu.
Ọ nwere onye rụzuru ihe Addy rụzuru iji mezuo?
Mgbe m chere maka nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, a na m eche maka ndị n’azụ ha: Steve Jobs, Bill Gates, Scott Dorsey, Chris Baggott, Scott Jones. Ka o sina dị, ọrụ Addy na-ebuwanye ibu. Ọ na-anabata ọhụụ anyị obere ụlọ akwụkwọ mahadum, na-ezipụ akwụkwọ akụkọ anyị, n'oge na-adịghị anya, m nwere ike dochie m dị ka àgwà dị n'azụ @addresstwo twitter njikwa. Ànyị na-agbaga n'ihu gaa na abis na-abụghị onye, ​​ma ọ bụ na-enwu ọkụ ọhụrụ na-agba aghara aghara?
Tags: avatarmbọnobere azụmahịa
Dec 16, 2011 na 8:20 PM
Otu n'ime ebe m huru na avatar na aru oru nke oma bu oru ebe ndi ahia choro ka ha ghara ibanye. Ebe E Si Nweta enyemaka, nsogbu omumu, ọnwụ ọnwụ, wdg. Bụ mpaghara niile ebe onye ahịa nwere ike ghara iru ala na-eche ihu mmadụ… ọbụlagodi na ọ bụ ihu mmadụ. Ọ bụrụ na emechara nke ọma (dị ka avatar dị n'elu), ekwenyere m na ọ nwere ike ịbụ ma ọkachamara ma kpọọ. Ọ bụrụ na ezighi ezi, ọ nwere ike ibibi.
Ohere maka avatar nwere ike ịgbawa, n'agbanyeghị na ndị mmadụ 'maara' na-agwa ndị agwa AI okwu. Siri na iPhone bụ otu ihe atụ, mana enwere sistemụ ekwentị dị elu ugbu a bụ olu kọmputa na - aga n'ihu. Ekwenyere m na, dị ka ndị mmadụ na-atụ anya ịgwa ndị mmadụ okwu ụbọchị ndị a, ha anaghị enwekwa ike iguzogide 'mkpụrụedemede' ka ndị odide ahụ nwere ike ịgwa ha okwu karịa.
Akwa post - n'ezie na-eme ka ị chee! Daalụ Nick!